“Anigu Cuuke ahaan, ballan baan shacabka Mudug ka qaaday; arrinkaas wax kama ogi, waana arrin igu cusub”. – Radio Daljir
“Anigu Cuuke ahaan, ballan baan shacabka Mudug ka qaaday; arrinkaas wax kama ogi, waana arrin igu cusub”.
Galkacyo, Aug 12 – Guddoomiyaha gobolka Mudug, ahna duqa magaalada Galkacyo Maxamuud Cabdiraxmaan Cuuke ayaa beeniyey warar issi soo tarayey oo tilmaamaya in uu iska-casilay xilka guddoominimo kaddib markii safar aan horay loo sii shaacin uu shalay ku tagay magaalada Muqdisho, loona fasirtay shaqo ka tagid.
Guddoomiye Cuuke waxaa uu waraysi uu bixiyey uuna la yeeshay wariye Mahad Jaamac Koronto oo ah weriye madax-bannaan uu ku sheegay in aysan waxba ka jiran wararka tilmaamaya in uu is-casilay, ayna yihiin been aan sal iyo raad toona lahayn oo lagu jaah-wareerinayo bulshada gobolka iyo kuwa Puntland.
Mudane Cuuke waxa uu socdaalkiisa uu ku tagay magaalada Muqdisho ku micneeyey in uu ahaa mid u gaar ah oo la xiriira booqasho eheliyadeed, laakiinse uusan u bixin shaqo-dawladeed iyo is-casilaad toona, waxaana uu intaasi ku daray Muqdisho in uu uga sii tallaabi doono Nairobi oo safarkiisu ku wajahnaa.
Beeninta is-casilaadda Cuuke ee uu meesha ka saaray waxay timid kaddib markii illaa shalay si weyn loo hadal hayey guddoomiyuhu in uu si hoose isaga casilay xilkii guddoonka gobolka taasoo ka dambaysay safar deg deg ah oo uu ugu baxay Kenya inkastoo uu ku sii hakaday magaalada Muqdisho, taasoo safiraado kala duwan laga bixiyey, aadna loo weynaynayey gabi ahaanba in uu isaga tahay shaqada gobolka.